Namuhla, yilowo nalowo wesifazane Ufuna ukubukeka emuhle futhi uphile ngendlela enempilo. Ezemidlalo kukhona okunye okukhulu ngebhayisikili, okuzoba sibonga ngempela ukhululekile futhi ithele le-model,-wheelers ezimbili, ngokuthi "esilayidi Miss 5000". Lesi bike libhekene induduzo eliphakeme, kufanelekile ekhululekile, ukuphepha kanye eyigeza.
lwati lolufinyetiwe brand
STELS brand edume elisuka Russian namuhla. Abasunguli be-inkampani kukhona Nachevkiny abafowethu ezaziya kubo yibo wasungula le lebula ethandwa ngo-1998. Ngemva kweminyaka engu-5, umphakathi wezwe lonke oboné isitshalo wokuqala okufanayo brand name, eye igxile ukukhiqizwa imishini ngebhayisikili. Ngaphezu mikhiqizo, inkampani ekhiqiza ATVs futhi Scooters, engesiyo kancane ethandwa kuka amabhayisikili.
ibhayisikili Ebukekayo futhi kumnandi "Stealth Miss 5000" has a uhlamvu esiqhubekayo kuhloswe abesifazane asebenzayo. Akukona nje kuphela ukuthi zikanokusho enhle, kodwa futhi ngempela esisebenzayo. Uhlaka imoto uhlukile nge umcabango anatomy. Kuvumela ngamunye omele emangalisayo isigamu zesifazane zizizwe zikhululekile lapho nokugibela ibhayisikili, kungakhathaliseki ukuthi uhlobo izingubo.
Wheel wemoto kuyinto adjustable ukuphakama impahla, okuyinto luhambisana nomthwalo emuva kahle, ekuqedeni umuzwa ukungakhululeki.
Izinketho Model "Stealth Miss 5000" uphelele. Kuhlanganisa izingxenye ezifana fenders, izakhi zokuzivikela, bezinyathelo tekusebentisa reflectors.
uzimele imoto ezenziwe ngensimbi engagqwali. Inzuzo enkulu yalesi material kuyinto nezimo ngokuphelele ukuthi kahle azwakale uhlevane umgwaqo nokungapheleli zenhlabathi, futhi kwanginika amandla amakhulu.
A ibhayisikili ukubopha uhlelo "Stealth Miss 5000" - usebe. Siyabonga kulesi sici, imoto ehlelwa umthwalo ubuncane ihabhu-no-wakhuluma, cishe akusho overheat, kanye kokunciphisa ukubaluleka.
usayizi Wheel kuyinto 26 amasentimitha.
Inombolo ngesivinini - 18.
Ukuthutha futhi ikholomu ayo is ezenziwe ngensimbi.
I-plug has a isakhiwo entwasahlobo.
imoto nezinsimbi eyenziwe aluminium.
Ibhayisikili Uhlaka eyenziwe osayizi 16 no-18 amasentimitha.
Inkomba intengo okungabizi ububanzi eyisibonelo libhayisikili "Stealth Miss 5000", okuyinto libhekene quality Yakha, ukuthembeka nokusebenza. imoto ehlisiwe rate amabanga kusuka 11 700 kuya ku-13 ruble 997, okubonisa ukuthi intando yeningi kanye nokufinyeleleka ikhasimende ngalinye.
"Stealth Miss 5000": Izibuyekezo ikhasimende
Imoto lokhu model, ngokuvumelana amakhasimende kanye nochwepheshe ozimele, kuyinto ehluke compact, engasindi, ezikwazi kakhulu futhi enokwethenjelwa. Ibhayisikili umngane omkhulu kokubili imfundamakhwela nezobuchwepheshe. Izimfanelo ezinhle libhayisikili, okuyinto wazizwa ohambweni lokuqala, kukhona timphawu tesakhiwo yayo, umsungulo nenduduzo. Ukuba khona izinyathelo ingenye izinkomba wenduduzo, ukusebenza kanye usability ibhayisikili. Umklamo adjustable of amasondo ayo futhi esihlalweni imoto uphelele amantombazane asemancane nabesifazane bonke osayizi.
I plus enkulu libhayisikili futhi ukubukeka kwaso ezikhangayo, engesiyo eliphansi kuya kumakhophi alo ezibizayo.
Ngaphandle ezicini ezinhle kusukela umbono yabathengi ibhayisikili has ezithile. Lesi sakamuva asisebenzi ohlelweni unyathela amabhuleki, okuyinto sezulu ezimanzi futhi lina onezinkinga nokuvuselela uncharacteristic ngoba inqubo evamile umsindo. Kodwa le nkinga Kulula ukusingatha ngenqubo evamile disk ukusulwa ngendwangu eyomile.
Pneumatics ngenhloso yokuzivikela. Kanjani ukukhetha isibhamu emoyeni zokuzivikela
Scooter Glider Y-Hamba Isihlalo: incazelo, izici kanye nokubuyekeza of the abanikazi
Indlela ukukhetha kwesokudla ibhayisikili isondo ukususwa?
"Izithelo Shop" - inethiwekhi ethandwayo izitolo nezindawo zokudlela ezinhle of St Petersburg